Axmed Madoobe oo la jiifo qaliin lagu sameeyay – news
Axmed Madoobe oo la jiifo qaliin lagu sameeyay
Madaxweynaha maamulka goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa la sheegayaa in uu dhaawaca qaliin dhanka sinta ah looga sameeyay la jiifo Isbitaal ku yaallo magaalada Nairobi ee caasimadda Kenya.
NAIROBI, Kenya - Magaalada Dhuusamreeb ee caasimadda Galmudug waxaa shalay galab isugu tegay madaxweynaha dowladda Federaalka Soomaaliya, madaxda maamulada Hirshabeele, Koofur Galbeed iyo Galmudug oo marti loo yahay, balse waxaanan shaashadda warbaahinta ka soo muuqan hoggaamiyaasha Jubbaland iyo Puntland oo aad loo hadal hayay.
Keydmedia Online oo dabagal ku sameysay maqnaashaha labadaan masuul oo haatan ku kala sugan Nairobi iyo Jabuuti ayaa soo ogaatay xogta rasmiga ah iyo sababta ka dambeysay in ay soo xaadiri waayaan kulanka xasaasiga ah ee Dhuusamareeb ka dhacaya maalmaha soo socda.
Madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa la sheegayaa in uu maanta ku soo laaban doono Garoowe, islamarkaana soo gaba gabeyn doono safarka Jabuuti, isagoona u soo gudbi doono magaalada Dhuusamreeb si uu uga qeyb galo shirka wada-tashiga dowladda iyo dowlad goboleedyada ee Dhuusamareeb.
Dhinaca kale madaxweynaha maamulka goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa la sheegayaa in uu dhaawaca qaliin dhanka sinta ah looga sameeyay la jiifo Isbitaal ku yaallo magaalada Nairobi ee caasimadda Kenya.
Wararka ayaa sheegaya in Madaxweynaha ay haatan xaaladdisa soo hagaageyso, balse lama oga in uu shirka Dhuusamareeb tegi karo iyo inkale, waxaana xusid in xubnaha guddiga farsamo ee ka baaran degidda talooyinka iyo hannaanka doorashada ku metelo Jubbaland aysan soo xaadirin kulankii guddiyada farsamo ee dhawaan ka dhacay Muqdisho.
Sidoo kale xubnaha Puntland ku metela guddigaan ayaa iyana la tebayaa, taasoo walaac hor leh muujisay, lagana yaabo in ay dib u dhac ku sababto shirka wejiga saddexaad ee Dhuusamareeb.
Ugu dambeyntii madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xalay Dhuusamareeb kula kulmay madaxda maamulada Galmudug, Koofur Galbeed iyo Hirshabeele, waxaa uuna la yeeshay kulamo gaar gaar ah oo hor u dhac u ah shirka wada-tashiga.